PlayerPro Music Player 5.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ဂီတ & အသံ PlayerPro Music Player
PlayerPro Music Player ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဒီ app ကို Android device များအတွက်တစ်ခုအဆင့်မြင့်ဂီတနှင့်ဗီဒီယိုကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
PlayerPro အစွမ်းထက်အသံ configuration options ကိုအတူတစ်ဆင်းလှသောအစ်မ, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် interface ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်တစ်ခုကိုဖြည့်စွတ်ရန်အများအပြားအခမဲ့ plugins ကိုတစ်ဦးရှေးခယျြမှုလည်းမရှိ: skin, DSP Pack ကို ...
မှတ်ချက်: PlayerPro ဂီတ Player ကိုတစ်ဦးကို standalone App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ယခင်ကက installed လျှင်သင်က PlayerPro ဂီတ Player ကို (အခမဲ့) version ကို uninstall လုပ်လိုက်သင့်တယ်။
• အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ ၌သင်တို့၏ဂီတ Browse နှင့် play: အယ်လ်ဘမ်, အနုပညာရှင်များ, တေးရေး, အမျိုးအစားများ, သီချင်းများ, သီချင်းစာရင်းများ, ဖိုလ်ဒါနှင့်အယ်လ်ဘမ်အနုပညာရှင်တွေဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
• ဖိုင်တွဲများအားဖြင့်သင့်ဗီဒီယိုများ Browse နှင့်ကစား။
• (က Android Auto အက်ပ်မှတဆင့်) ကို built-in Android ကိုအော်တို (သင့်ကားမှုစနစ်သို့ပေါင်းစည်း) သို့မဟုတ်ကို standalone ကျေးဇူးတင်ကားမောင်းနေစဉ်သင့်ရဲ့ဂီတကိုနားထောင်ပါ။
•သင့် TV သို့မဟုတ်မည်သည့် Chromecast အသံ သဟဇာတကိရိယာသည်သင်၏ဂီတစီးဆင်းစေ။
•သင်သတင်းရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးကနေရှေးခယျြနိုငျကွောငျးကို အယ်လ်ဘမ်အနုပညာလက်ရာများ, အနုပညာရှင် / တေးရေးဆရာရုပ်ပုံများနှင့်အမျိုးအစားသရုပ်ဖော်ပုံများ နှင့်သင်၏ဂီတစာကြည့်တိုက်ဖွင့်အသက်ဝင်စေဖို့: ID3 tags များ (embedded အနုပညာ), SD ကဒ်ဖိုလ်ဒါ, ပြခန်း app, နှင့် အင်တာနက်။
• အများအပြားရရှိနိုင်အရေပြားတဦးတည်းကို install အားဖြင့် Player ကို၏ user interface ကိုပြောင်းလဲပါ။
•အ layout ကို Customize, Grid ဒါမှမဟုတ်စာရင်းများအကြားရွေးချယ်ရာတွင် ရှုမြင်။
• ကြည့်ရန်နှင့်သင့်ဂီတဖိုင်တွေရဲ့ ID3 tags များအတွက် embedded စာသားတွေကို edit ။
• လူပျိုနှင့်အဖွဲ့ကို Tag ကိုတည်းဖြတ် : ခေါင်းစဉ်, Album, အနုပညာရှင်, အယ်လ်ဘမ်အနုပညာရှင်, တေးရေးဆရာ, လမ်းကြောင်း, တစ်နှစ်, အမျိုးအစား, သီချင်းစာသား, မှတ်ချက်။
• mixable အသံဖိုင်သက်ရောက်မှု Default: 15 default အနေနဲ့ရလာဒ်ကဒိ, စတီရီယိုခွံ့ပြုသည်အကျိုးသက်ရောက်မှု, reverb သက်ရောက်မှု (ကြီးမားသောခန်းမ, အလတ်စားခန်းမ, ပန်းကန်, အသေးစားအခန်းတစ်ခန်း, အလတ်စားအခန်းတစ်ခန်း, ကြီးမားတဲ့အခန်းက), ဘေ့စထပ်တိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ5တီးဝိုင်းဂရပ်ဖစ် equalizer , အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်။
• အခမဲ့အပိုဆောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ် DSP plugin ကို : (384kHz, 32-bit နဲ့အထိ) High-Res အသံ, 20 default အနေနဲ့ရလာဒ်ကဒိ, Pre-Amp ထိန်းချုပ်မှု, ဘေ့စထပ်တိုးထိန်းချုပ်မှု, စတီရီယိုခွံ့ပြုသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 10 တီးဝိုင်းဂရပ်ဖစ် Equal, လက်ဝဲလက်ျာအသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်, optional ကိုမိုနို output ကို။ Gapless ပြန်ဖွင်။ အော်တို / Manual crossfade ။ ပြန်ဖွင့်အမြတ်။ အသံကန့်သတ်။ က Settings> အသံသွားပြီးအခမဲ့ plugin ကို install လုပ်ဖို့ option ကို "DSP pack ကို Download လုပ်ပါ" ကိုရွေးချယ်ပါ။
• ဂီတစာရင်းဇယားများနှင့်စမတ်ဖွင့်စာရင်းများကို : မကြာသေးခင်ကအနည်းဆုံးကစား, မကြာသေးခင်ကကစား, အများစုမှာကစား, ထိပ်တန်း rated, ကဆက်ပြောသည်။ နောက်ဆုံးကစားခဲ့ / ကဆက်ပြောသည်, album အနုပညာရှင်, အမျိုးအစား, ခေါင်းစဉ်, ပြဇာတ် / count က skip, rating, etc Podcast တခုကို, ကြာချိန်, တစ်နှစ်, ဖိုင်လမ်းကြောင်းကိုဖြစ်ပါသည်: အဆိုပါစမတ်သီချင်းစာရင်းကိုအယ်ဒီတာသုံးပြီးနောက်ထပ်ထုံးစံဖွင့်စာရင်းများကိုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်များစွာကွဲပြားခြားနားသောစံနှုန်းများ Build
• Import ကိုများနှင့်ပို့ကုန်ဂီတသမိုင်းနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ သင်အကြိုက်ဆုံး desktop ပေါ်မှာဂီတကစားသမားအနေဖြင့်။
• ဂီတ folder ကိုရွေးချယ်ရေး : တိကျတဲ့ဖိုင်တွဲရန်သင့်ဂီတစာကြည့်တိုက်ကန့်သတ်ထား။
•2သော့ခတ်မျက်နှာပြင် Widgets တွေ ရွေးချယ်မှု အများအပြားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ: slider ကို, အသံ Toggle အား, အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်သုံးပြီးပုဒ် skip, အမူအရာပွတ်ဆွဲ, နောက်ခံရွေးချယ်မှု, ရွေးချယ်ရေးထိန်းချုပ်ထား, အချိန် Display, အသားအရေရွေးချယ်ရေးသော့ဖွင့် ...
•5ကွဲပြားခြားနားသောပင်မမျက်နှာပြင် Widgets တွေ ရွေးချယ်မှု (4x1, 2x2, စာလုံးမျက်နှာ 3X3, 4x4, 4x2) ။ အားလုံး Widgets တွေစိတ်ကြိုက်နှင့် skinnable ဖြစ်ကြသည်:6ကွဲပြားခြားနားသောအရေခွံရရှိနိုင်မည့်အစားစသည်တို့ကိုအယ်လ်ဘမ်အနုပညာလက်ရာများ, ratings ဖော်ပြရန် option ကို, ရောသမမွှေ / ထပ်ထိန်းချုပ်မှု၏အနုပညာရှင်ရုပ်ပုံဖော်ပြရန် option ကို
• သတိပေးချက် status ကို : display ကိုအယ်လ်ဘမ်အနုပညာလက်ရာများ, ခေါင်းစဉ်, အယ်လ်ဘမ်နှင့်အဆိုရှင်, ပြဇာတ် / တန့်, ရှေ့ဆက် skip နဲ့သတိပေးချက်အဆင့်အတန်းအတွက်ထိန်းချုပ်မှုကိုရပ်တန့်။
• Scrobblers လူကြိုက်အများဆုံးထောက်ပံ့ပေးသည်။
• အိပ်စက်ခြင်း timer နေရာမှာ မှိန်နှင့်အတူထွက်။
•သင့်အကြိုက်ဆုံး လူမှုရေးကွန်ရက်ပေါ်တွင် ဝေမျှမယ် စာသားကိုဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ, အယ်လ်ဘမ် / အနုပညာရှင်အနုပညာ ။
• နားကြပ်ထောက်ခံမှု ။ ရှည်လျားသောစာနယ်ဇင်းနှင့်နှစ်ဆ / သုံးဆစာနယ်ဇင်းလုပ်ရပ်များစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
•စာကြည့်တိုက်အကျယ်ရှာဖွေရေး။ Voice ကိုရှာဖွေရေး နဲ့ Google မှလက်ထောက် ထောက်ခံမှု။
• ပွတ်ဆွဲအမူအရာ : ပွတ်ဆွဲအယ်လ်ဘမ်အနုပညာပြန်ဖွင်ပြန်လည်စတင် / ခဏရပ်ရန်သီချင်းတွေကိုနှစ်ချက်ကိုထိပုတ်ပါသို့မဟုတ်ရှည်လျားစာနယ်ဇင်း skip ရန်။
• က feature ခါ : သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလာမယ့် / ယခင်သီချင်း (e.g .: လာမည့် / ယခင်သီချင်းကစားရန်ထိပ်ဆုံးမှအောက်ဆုံးသို့မဟုတ်အောက်ဆုံးမှထိပ်တန်းလှုပ်) ကစားရန်တုန်လှုပ်ပေးပါ။
... နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်များစွာသောအခြား features တွေ!
PlayerPro Music Player အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PlayerPro Music Player အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PlayerPro Music Player အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PlayerPro Music Player အား အခ်က္ျပပါ
mark8 စတိုး 1.13M 556.77M
PlayerPro Music Player ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PlayerPro Music Player အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.3
ထုတ်လုပ်သူ BlastOn LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.iubenda.com/privacy-policy/8067714/full-legal
Release date: 2019-09-01 19:44:54
လက်မှတ် SHA1: 75:D0:08:A8:8F:DD:99:44:7E:A1:EC:2F:AA:AF:17:41:0C:6F:30:73
ထုတ်လုပ်သူ (CN): tbig
အဖွဲ့အစည်း (O): tbig
နယ်မြေ (L): nce
PlayerPro Music Player APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ